6da lama degaan ee waa weyn ee Aasiya oo aadan tabi karin | Wararka Safarka
Saxaraha waawayn ee Aasiya
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Suuriya, Safarka Aasiya
Saxaraha waa a aag aan roob helinIn kastoo taasi aysan ahayn sababta aan ugu fekereyno in lamadegaanku uusan lahayn nolol nooc kasta ha noqotee. Waxay qabataa, iyo sida ay jiraan lama degaanno oomane ah oo aan haba yaraatee lahayn wax ubax ama xayawaan ah, waxaa jira kuwo kale oo u dhow, dariiqadooda, beero beerta.
Markaan fiirino khariidada lamadegaanka adduunka, waxaan ogaanay inay jiraan ururo lama filaan ah oo kuyaal Waqooyiga Afrika iyo Aasiya inteeda badan. Aasiya waxaa jira qiyaastii saddex iyo labaatan saxaraha ama lamadegaanka semi-lamadegaanka, lamadegaanka soo jireenka ah iyo kuwa kale oo dhismaya. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah kuwa aan caadi ahayn oo caan ah waana ay yihiin lamadegaanka waaweyn ee Aasiya.
1 Saxaraha Carabta
2 Lama degaanka Gobi
3 Lamadegaanka Karakum
4 Kyzyl Kum lamadegaanka
5 Lamadegaanka Takla Makan
6 Saxaraha Thar
Tani waa lamadegaan aad u weyn, oo ah 2.330.000 kiiloomitir laba jibaaran, oo ka bilaabma Yemen ilaa Gacanka Beershiya iyo Cumaan oo taga Ciraaq iyo Urdun. Saxaraha wuxuu ku yaal Bariga Dhexe, galbeedka Aasiya, wuxuuna ku dhowaad gebi ahaanba qabsadaa Jasiiradda Carabta. Waa cimilo qalalanWaxaa jira tuunbooyin casaan ah, carro dabacsan iyo heerkul maalinba dhalaalaya, oo ah 46ºC, oo baraf qaboojiya habeenkii.
Qaar ka mid ah noocyada flora iyo fauna ayaa loo qaatay inay ku noolaadaan halka kuwa kalena ay ku halaagsameen koritaanka magaalooyinka iyo ugaarsiga aadanaha ee joogtada ah. Saxaraha Aasiya wuxuu hodan ku yahay keydadka baaruud, fosfoorasyada iyo gaaska dabiiciga ah iyo saliida waxaana loo maleynayaa in laga yaabo in howlahani ay yihiin kuwa maareynaya ilaalintiisa.
Lama degaanka Gobi
Waa lamadegaan aad u ballaadhan oo mashquul ah qayb ka mid ah Shiinaha iyo Mongolia. Buuraha Himalaya waxay xiraan daruuraha biyaha ka keena Badweynta Hindiya sidaas oo kale waa lamadegaan qalalan, iyadoo roob la waayey. Waxay leedahay bed dhan 1.295 kun oo kilomitir oo laba jibbaaran iyo waa lamadegaanka ugu weyn Aasiya.
Gobi ma aha lamadegaan ciid badan leh oo u badan sariirteedu waa dhagax weyn. Isla mar ahaantaana waa a lamadegaanka qabowXitaa way barafoobi kartaa oo xitaa waad arki kartaa godadka barafka lagu daboolay. Dhammaan maxaa yeelay waxay ku taal meel sare, inta u dhexeysa 900 iyo 1520 mitir. -40ºC waa heerkul macquul ah xilliga qaboobaha 50 andC xagaaga sidoo kale waa caadi.
Gobi waa mid ka mid ah lamadegaankaas oo aan istaagin oo sii wadaya koritaankiisa, waxayna ku sameysaa heerar cabsi leh deg deg deg ah hannaanka xaalufka inaad la kulanto. Haa, waa caan sababtoo ah waa Gogosha Boqortooyada Mongol, ee Genghis Khan.
Cidladan waa bartamaha asia oo af Turki ah macnaheedu waa ciida madow. Saxaraha intiisa badani wuxuu ku yaal dhulalka Turkmenistan. Ma leh dad badan iyo sidoo kale roobku aad ayuu u yar yahay. Gudaha gudihiisa waa buuro kala duwan, buuraha Bolshoi, halkaas oo laga helay meydkii dhagaxa dhagaxa, iyo dhowr meelood oo soo dhawayn ah oo loogu talagalay kuwa go'aansada inay raacaan.
Lamadegaanku sidoo kale wuxuu leeyahay goobaha saliida iyo gaaska dabiiciga. Dhab ahaantii, gudaha halkan waa Albaabka caanka ah ee Cadaabta, the Godka Darvaza, aag gaas dabiici ah oo dumay 1971. Tan iyo markaas waxaa si joogto ah loo shiday si ula kac ah, si looga fogaado khataraha: waa dhexroor 69 mitir ah iyo 30 mitir qoto dheer.
Ugu dambeyntii, dhowr boqol oo sano oo raad ah ayaa ka talaaba: waa tan Tareenka Trans-Caspiano Waxay raacdaa Wadada Xariirta waxaana dhisay Boqortooyadii Ruushka.
Kyzyl Kum lamadegaanka
Cidladani waxay ku taal Bartamaha Aasiya magaceeduna waa macnaha Turkiga ciid guduudan. Waa sax labada wabi dhexdooda maantana waxay qabsatay dhulalka saddex dal: Turkmenistan, Uzbekistan iyo Kazakhstan. Waxay leedahay 298 kun oo kiilomitir oo laba jibbaaran.
Inta badan lamadegaankan waxay leedahay ciid cad waana jiraan oases qaar ka mid ah. Dhinaca labada wabi ee riixaya iyo jiidahaas waxaa ku yaal tuulooyin beeralay ah.
Lamadegaanka Takla Makan
Saxarahaani wuxuu ku yaal gudaha Shiinaha, gobolka Xinjiang Uyghur, oo ah gobol ay ku badan yihiin Muslimiinta. Waxay ku wareegsan tahay buuro waqooyi iyo galbeed sidoo kale lamadegaanka Goni lafteeda ayaa ku xeeran bariga. Waxay ku fadhidaa aag dhan 337 kun kiilomitir oo laba jibbaaran iyo in kabadan 80% dunideedu way dhaqaaqdaa si joogto ah u beddelaya muuqaalka.
Shiinaha wuxuu dhisay waddo weyn isku xirka Luntai iyo Hotan, laba magaalo. Sida lamadegaanka Gobi, Himalayas waxay diidaan daruuraha roobka, sidaas waa lamadegaan aad u qalalan iyo xilliga qaboobaha heer kulka wuxuu ka hooseyn karaa 20 ºC. Waxaa jira biyo aad u yar sidaa darteed boorashku waa kuwo qiimo leh.
Al Thar waxaa loo yaqaan lamadegaanka weyn ee Hindiya waana dhul oomane ah oo u shaqeeya sida xadka dabiiciga ah ee u dhexeeya Hindiya iyo Baakistaan. Waa lamadegaan ku-meel-gaadh ah oo haddaynu ka hadlayno boqolleyda, in ka badan 80% waxay ku taal dhulka Hindiya oo ay ku fadhido 320 kun oo kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Thar waxay leedahay qayb qallalan, dhanka galbeed, iyo qayb lamadegaan ah, dhanka bari, oo leh duniyo iyo roob yar. Inta badan saxarahaan Hindiya waa dunes wareegaya Waxay aad u sii dhaqaaqaan kahor xilliga monson sababo la xiriira dabaylo badan.
Saxarahaani wuxuu leeyahay hal wabi oo keliya, Luni, roobka yar ee da’aana wuxuu sameeyaa inta u dhexeysa bilaha Luulyo iyo Sebtember. Qaar baa jira harooyinka biyaha cusbada roob buuxiya kuna baaba'a xilliga qalalan. Labada Pakistan iyo Hindiya labaduba waxay u qoondeeyeen meelaha qaarkood sida "Meelaha la ilaaliyo ama meelaha barakaysan ee dabiiciga ah". Jiinleyda, cawl, xayawaanka xamaaratada, dameeraha duurjoogta, dawaco cas iyo noocyo kala duwan oo shimbiro ah ayaa ku nool.
Thar wuxuu leeyahay waxyaabo gaar ah waa lamadegaanka ugu badan adduunka. Hindus, Muslim, Sikhs, Sindhis iyo Kolhis waxay ku nool yihiin, qaar Hindiya, qaarna Pakistan, waxaa lagu qiyaasaa 83 qof halkii kiilomitir oo laba jibbaaran oo u heellan xoolaha iyo beeraha oo leh nolol dhaqameed hodan ah oo ay ka mid yihiin xafladaha dadyowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Saxaraha waawayn ee Aasiya
TITO ARMANDO AGÜERO ARIAS dijo
macluumaad aad u wanaagsan
Jawaab TITO ARMANDO AGÜERO ARIAS
Tilmaamo waxtar leh ee safarka dibadda
Halka Badda Woqooyi kula kulanto Baltiga